Maamulka Jubba oo diiday MADOOBE - Caasimada Online
Home Warar Maamulka Jubba oo diiday MADOOBE
Maamulka Jubba oo diiday MADOOBE
Kismaayo (Caasimada Online) Magaalada Kismaayo waxaa maanta ku shiray golaha wasiirrada maamulka KMG ah ee Jubba, waxaana kulan kooda la sheegay in ay ku hadleen doorashadii ka dhacday toddobaadkan magaalada Baydhabo, taasoo madaxweyne loogu doortay maamulka lixda gobal ka kooban, Madoobe Nuunow Maxamed.
Markii uu soo dhammaaday kulankooda waxaa saxaafadda la hadlay afhayeenka maamulka KMG ah ee Jubba, Cabdinaasir Seeraar Maax, wuxuu sheegay golaha wasiirrada ay isku raaceen in laga soo horjeesto oo aan la taageerin doorashadii lagu doortay Madoobe Nuunuw Maxamed.
Wuxuu sheegay doorashaas inay ku dhacday si qaldan isagoonka carabka ku adkeeyay wax lix gobal la dhaho ma jirto.
Cabdinaasir Seeraar ayaa madaxda dowladda dhexe uga mahadliyay go’aanka ay qaadatay shirarka iska horjeeda ee ka socda magaalada Baydhabo.
Ugu dambeyn dadka deggan Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose wuxuu ku yiri dhista maamul gobaleed balse ha ku mashquulina goballo maamul ay u sameesan yihiin sidda uu hadalka dhigay.